» केटिले केटिसंगै बिहे गरे, भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ ! यसरी खोले सुहाग रातको पोल (भिडियो हेर्नुस् ) केटिले केटिसंगै बिहे गरे, भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ ! यसरी खोले सुहाग रातको पोल (भिडियो हेर्नुस् ) – हाम्रो खबर
केटिले केटिसंगै बिहे गरे, भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ ! यसरी खोले सुहाग रातको पोल (भिडियो हेर्नुस् )
2021, February 11th, Thursday
केटिले केटि संगै बिहे गरे भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी मज्जा आउछ ! यसरी खोले सुहाग रातको पोल (भिडियो हेर्नुस् ) ।
केही दिन अघि काठमाडौमा केटा र केटाबीचको विवाहको निकै चर्चा भएको थियो ।
अहिले फेरी दुई युवतीबीचको विवाह पनि सार्वजनिक भएको छ । दुई युवती मध्य एक जना श्रीमान र अर्को श्रीमती बनेका छन् । श्रीमान बनेकी युवतीको हाउभाउ भने केटा मानिसको जस्तै छ । हाम्रो समाजमा स`म लिं`गी बीचको विवाह पनि सामान्य बन्न थालेको छ । यि जोडी पनि भर्खर विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । एक जनाको नाम रविना केसी र ममता केसी(खड्का) हो ।
गोर्खाका उनीहरुले विवाह पछि ममताले आफ्नो थर पनि परिवर्तन गरेर खड्कावाट केसी भएकी छन् । उनीहरु अध्ययनको शिलसिलामा संगै बस्थे । त्यती बेला उनीहरुबीच त्यस्तो योजना केही थिइन ।
दुवै जनाले एउटै केटासंग विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए । तर दुवै जना एक अर्कासंग छुट्टीएर बस्न नसक्ने भएपछि विवाह गरेर संगै बस्ने निर्णय गरे । दुई जनाले तीन साता अघि नजिकैको मन्दिरमा गएर विवाह गरेका हुन् ।
त्यसैले पनि उनीहरुले एक अर्कालाई छोड्न नसकेकाले विवाह नै गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनीहरुको केही समय केटासंग प्रेम भएपनि दुवैको ब्रे`क`अप भएपछि संगै बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफुहरुलाई पुरुषको श`रि`र नचाहिएको बताएका छन् । हेर्नुहाेस् बाकिँ रिपोर्ट भिडियाेमा:–भिडियाे हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहाेस्-